Soomaaliya oo soddon sano ka dib guul dhaqaale gaadhay | Hangool News
Soomaaliya oo soddon sano ka dib guul dhaqaale gaadhay
Guddiga fullinta ee Bangiga Adduunka ayaa sheegay inay qaadeen tallaabo lagu soo celinayo xiriirkii maaliyadeed ee kala dhaxeeyay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya muddo soddon sano kadib ah.
Baanka Adduunka ayaa sheegay in tani ay fursad u tahay Soomaaliya oo ay heli doontaa maalgelin ay ka hesho sanduqa horumarinta caalamka ee bangigaasi.
Arrintan ayuu bangiga sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay u sahleyso inay si dhaw ula shaqeeyaan dhammaan laamaha kala duwan ee uu ka kooban yahay, si ay usoo jiitaan maalgashi Soomaaliya ka caawin kara dib u dhiska dalka iyo xasiloonida.
“Go’aankan wuxuu wadada u xaarayaa dib usoo celin rasmi ah oo ku saabsan hawlaha Bangiga Adduunka, kaas oo Soomaaliya u keenaya taageero adag iyo dedaalo dib loogu soo celinayo dib usoo kabashada dhaqaale,” ayuu yiri agaasimaha mamulka ee bangigaasi.
“Guushan waxay ka dhalatay dedaalo iyo iskaashi soo socday sanado, kaas oo u dhaxeeyay Bangiga Adduunka iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana rajeyneynaa in wadashaqeynta ay noqoto mid sii socota.”ayuu hadalkiisa raaciyay.
Go’aanka guddiga fullinta Bangiga Adduunka ayaa la sheegay in uu ku saleysan yahay dedaalo dhanka siyaasadda maaliyadda, arrimaha bulshada iyo dib u habeyn dhaqaale oo ay sameysay Dowladda Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay.
Maamulka maaliyadeed ee Soomaaliya ayaa haatan bangiga uu sheegay in uu yahay mid shaqeeyo haddii ay ahaan lahayd canshuur ururinta, jaangoynta miisaaniyadda, hanti dhowrka, maamulka lacagaha caddaanka ah iyo sidoo kale isla xisaabtanka.
Dowladda Federaalka, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ayaa lagu ammaanay inay dib u habeyn wanaagsan ku sameysay hey’adaha maaliyadda iyo sharciyada asaasiga u ah maareynta dhaqaalaha Soomaaliya iyo dib u habeyn lagu sameeyay ilaha dhaqaale ee dowladda.
Sidoo kale dib u eegista lagu sameeyay siyaasadaha dhaqaale ee dalka oo ay kamid tahay sharciyada maareynta dhaqaalaha dadweynaha ayaa la sheegay in ay waxbadan ka badeshay maamulka maaliyadda iyo dakhliga soo gala dowladda.
“Soomaaliya waxay sameysay dib u habeyn muhiim ah, waxayna muujisay sida ay uga go’an tahay ka guul gaaridda dib u habeynta,” ayuu yiri Hafez Ghanem oo ah madaxweyne kuxigeenka Bangiga Adduunka ee Afrika.
Tallaabooyinka dib u habeynta ee ay qaaday Dowladda Soomaaliya ayuu bangiga sheegay inay xoojinayaan awoodda ay dowladda u leedahay in shacabkeeda ay siiso adeegayad asaasiga ah sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqo abuurka.
Image captionWasiirka maaliyadda Soomaaliya, Dr Beyle
Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle aya maqaal lagu daabacay bogga Bangiga Adduunka ku sheegay in arrin wanaagasan ay tahay inay isla jaanqaadaan bangiga iyo Dowladda Soomaaliya, aqoonsiga bangigaasi uu siiyay hey’adaha maaliyaddana uu yahay mid keeni doona daahfurnaan iyo isla xisaabtan.
Go’aanka Bangiga Adduunka ayaa Soomaaliya waxaa uu u yahay mid muhiim ah, wuxuuna horseedi doonaa in Soomaaliya ay hesho mashaariic lagu horumarinayo kaabayaahsa dhaqaalaha.
“Bangiga Adduunka wuxuu door muhiim ah ka qaatay in Soomaaliya ay soo gaarto halka ay maanta taagan tahay, waxayna sanduuqa bangigaasi ee horumarinta ay ka heleen lacag dhan 250 milyan oo dollar oo qeyb ka ah qorshaha deyn cafinta Soomaaliya, ayna sii xoojin doonta horumarka dalka uu ka gaaray bixinta adeegyada asaasiga ah,” ayuu sheegay Bangiga Aduunka.
Soomaaliya ayaa markii hore ku tiirsaneyd mashaariicda ay maalgeliyaan dalalka Denmark, Midowga Yurub, Finland, Talyaaniga, Norway, Sweden, Switzerland, UK iyo Mareykanka, balse hadda waxaa muuqata in haddii uu hirgalo qorshaha deyn cafinta uu culeys dhaqaale ka qaadi doono Soomaaliya, uuna horseedi doono fursado maalgashi.